Bottle Openers Factory - China Bottle Openers Abakhiqizi nabahlinzeki
Ukuvula amabhodlela kuyithuluzi eliwumgogodla wokupha okwenyusa kwanamuhla nokukhethwa kwezipho kubartender okhethekile, amahhotela, umndeni, isuphamakethe noma ukusetshenziswa kwebrendi njll. Izipho Ezinhle Ezicwebezelayo zikhiqiza amabhodlela amaningi avulwa ngezitayela ezahlukene, izinto zokwakha, imibala, ubujamo nobukhulu ngokuya izikhathi nezinhloso ezehlukene. Ukuze kuhlangatshezwane nezimfuno ezahlukahlukene, sinesikhunta esivele sisuka kukhwalithi ejwayelekile siye kweliphezulu, ungakhetha i-laser noma uphawu lokuphrinta kubo ngqo ukuze lube uhlobo lwakho oluyingqayizivele, futhi wamukelekile kakhulu thumela uphawu lwakho nomkhiqizo laphaya ngoku-oda ibhodlela langokwezifiso ukuvula okuvela kithi. Imininingwane: Izinketho: Isivuli webhodlela likabhiya wephromoshini, ukuvula ibhodlela lekhadi lesikweletu, ukuvulwa kwebhodlela okwenziwe ngokwezifiso, imiklamo yokuvula evulekile. ● Izinto Ezitholakalayo: I-Bronze, i-Iron, i-Zinc alloy, insimbi engagqwali, i-Aluminium, njll. ● Usayizi: usayizi wokuklama ovulekile nosayizi owenziwe ngezifiso otholakalayo. ● Umbala Wokufaka: Igolide, Isiliva, I-Bronze, i-Nickel, iCopper, i-Rhodium, i-Chrome, i-nickel emnyama, ithusi le-Antique, isiliva le-Antique, ithusi le-Antique, igolide le-Satin, isiliva le-Satin, umbala wokugoba okabili, njll. ● I-logo: Ishicilelwe, isakaza, yaqoshwa isithombe, yaqoshwa, yapendwa noma yaphrintwa ohlangothini olulodwa noma ezinhlangothini ezimbili, njll. ● Izinqubo zokukhetha ezinhlobonhlobo, ukwakheka okuhlukahlukene okuvulekile nokwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala. ● Ukupakisha: Ukupakisha ngobuningi, ukupakisha ibhokisi lesipho elenziwe ngokwezifiso noma ngokwesicelo seKhasimende
Izimboni Zokuvula Amabhodlela Engagqwali
I-Zinc Alloy 3D Bottle Opener